Password Recovery Tools များမှကာကွယ်ခြင်း — MYSTERY ZILLION
Password Recovery Tools များမှကာကွယ်ခြင်း
ဒီပို့စ်ကို ပလန်းနက် (
) မှာ user တစ်ယောက်ရဲ့ ဖော်ပြချက်နဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး တင်လိုက်တာပါ။
Nirsoft ရဲ့ အဲ့ဒီ Tool တွေက ယနေ့အချိန်မှာ အသုံးမ၀င်တော့ပါဘူး။ ယခု Firefox V.3. --> တွေအားလုံး နဲ့ Gmail တွေက ဒါတွေကို လက်မခံတော့ပါဘူး... Antivirus Program တွေအားလုံး Detect သိပါတယ်။
2007 လောက်က ၄င်းကို Keylogger တွေမှာ မြှုပ်နှံ့ထည့်သုံးကြပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းဘယ်သူမှ အဲ့လိုမသုံးတော့ပါဘူး။
Cyber မှာ အင်တာနက်အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေဟာ အကယ်လို့ အသုံးပြုပြီးသည်ဆိုသည်နှင့် မိမိရဲ့ Browser က privacy history ကိုရှင်းလင်းခဲ့ရင် ၄င်း pw ကို မရနိုင်ပါဘူး။
ဒါတွေကို Password Recovery Tools လို့ခေါ်ပါတယ်... တစ်နည်းအားဖြင့် ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုစဉ်အချိန်အတွင်းမှာ မိမိတို့အသုံးပြုတဲ့ Software (eg. Internet Browser) တွေက ယာယီ ဖိုင်တွေသိမ်းထားတတ်ပါတယ်.. (e.g Cookies) . Password တွေကိုသိမ်းထားတာပါ။
ဒါကြောင့် ဒီရန်ကာကွယ်ဖို့ Cyber မှာအသုံးပြုသူတွေက Keylogger တွေအပြင် ဒီလို Password Recovery Tools တွေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်... မိမိသုံးပြီးတိုင်း History နဲ့ Privacy Cookies တွေကို ရှင်းပစ်ဖို့လိုပါတယ်။
တစ်ချို့ Cyber တွေက Deepfreeze လို PC Automatic Restoring software တွေသုံးထားတဲ့အတွက် user နဲ့ သူတို့ရဲ့ pc အတွက် safe ဖြစ်တာပေါ့...
Cyber Cafe တော်တော် များများမိမိတို့ရဲ့ Computers ကို Anti-Spyware တွေထည့်ထားသင့်ပါတယ်.. ပြီးရင် user တွေအနေနဲ့ ၄င်းကို အလွယ်တစ်ကူ ပိတ်လို့မရအောင် password protect လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ Antivirus/Anti Spyware တော်တော်များများမှာ ၄င်း functions အကုန်ပါပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယခုလို Password Recovery Tools တွေသုံးမယ်ဆိုရင် user တွေက Antivirus ကို အရင်ပိတ်ရပါတယ်.. ပြီးမှ သုံးရတာပါ။
တစ်ချက်.. Antivirus တွေကို .bat နဲ့ ပိတ်လို့ရပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ယခုလို password တွေ protect လုပ်ထားရင်မရပါဘူး။ Panda နဲ့ Kaspersky တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်သလောက် အဲ့သလို .bat နဲ့ အသုံးပြုခြင်းက ၄င်း password protecting ကို မကျော်လွန်နိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်ပိုင်သုံးတဲ့ သူတွေဆိုရင် Laptop ဖြစ်စေ Desktop ဖြစ်စေ မိမိမသိပဲနဲ့ အခြားတစ်ပါးသူတွေကိုပေးမသုံးပါနဲ့။
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အခု လို နည်းပညာပိုင်းကို ေ၀မျှတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဘဲ။ နောက်ထပ် နည်းပညာအသစ်အဆန်းတွေရှိလည်း ထပ် မျှပါအုံးလို့....:d။
ပညာကို လည်းတန်းဖိုးထားပါတယ်။ လူကိုလည်းတန်းဖိုးထားပါတယ်။